Ogaden News Agency (ONA) – Ethiopia oo warbaahintii Caalamka Jaam gareysay iyo taariikhdi Ilays TV.
Ethiopia oo warbaahintii Caalamka Jaam gareysay iyo taariikhdi Ilays TV.
Taliska Ethiopia ayaa jaam gareeyay Sateliteka ArabSatiyaga oo hawada ka saaray idaacado iyo Tv-yo laga leeyahay wadamada ree galbeedka kuwooda ugu waaweyn oo kamid yihiin, BBC, Deutsche Welle, france24,Voice of America iyo warbaahin badan oo laga daawan jiray Satelite-ka ArabSat.
Aggaasimaha BBC iyo Deuche Welle ayaa canbaareeyay jaamka loogeystay satelitkooda dowlada ethiopia illaa hada maysan ka jawaabin sababta ay u jaam gareysay sateliteka Arabsat oo hada ka hor tanoo kale ay ku sameysay.
Jaam gareynta Carabsat ayay Ethiopia bilowday sanadkii 2012 iyaga oo ku daba jira sidii ay hawada uga xidhi lahaayeen Barnaamijka Ilays TV oo kasoo gali jiray Tv-ga Eritrea maalmaha Arbacada ah 4 Galabnimo ee Saacada bariga Afrika.
Barnaamijka Ilays TV iyo Somali Channel TV:
Wadanka Ethiopia oo ah wadan Haayadaha Xuquuql Insaanka iyo Wadamada Ree galbeedkuba ku eedeeyeen inay dhulka Somalida Ogadeniya ka geysteen danbiyo daggaal iyo kuwo ka dhan ah xuquuqda aadamaha ayaa waxaa barnaamijka Ilays TV bilaabay sanadkii 2010kii bilaabay inuu soo daayo Barnaamijyo soo bandhigaya xasuuqa ka socda dhulka Ogaden, iyaga oo si dhex dhexaad ah oo nidaam saxaafadeed leh u soo bandhigaya wararka iyo dhacdooyinka ka dhaca dhulkaas Ethiopia ay heysato.
Barnaamijka Ilays TV oo ahaa warbaahinta kaliya ee maqal iyo muuqaal ugasoo waranta dhulka Ogadeniya ayaa waxa uu kabixi jiray Tv-ga Somali Channel xaruntiisa Lonodon todobaadkiiba 1 saac Sep 2010 ilaa May 2011. Barnaamijkan oo dad aad u badan ku taxnaayeen waxaa kaluu kor u qaaday sumcada TV-ga Somali channel oo waqtigaas cusbaa.
Dowlada Ethiopia oo ah talis cabudhiya saxaafada islamarkaasna ogoleyn in howlaheeda daakhiliga ah laga waramo ayaa bilowday inay handadaado iyo cabsi galin ku bilowdo maamulka iyo aggaasimaha TV-ga Somali Channel si uu u joojiyo Barnaamijka Ilays TV ee ka baxa TV-gaas. Mudo kooban kadib waxaa Dowlada Ethipia ay toos u abaartay shaqaalaha Somali Channel ee ka howlgala geeska Afrika sida Djibouti, Puntland, Muqdiso iyada oo xanibaado badan lagu rogay shaqo maalmeedkii wariyaasha TV-ga uga soo warama geeska Afrika. Iyada oo marar badan loo diiday xitaa inay kasoo waramaan Shirarka ay qabanayaan Madaxda Dowladi ku meel gaadhka aheyd ee Somalia.
Taliska Ethiopia waxa uu arrintaas kusii xoojiyay innuu u diro Wadanka Thailand wafti uu hoggaaminayo Wasiirka isgaadhsiinta Ethiopia oo ay wehelinayaan khubaro Chinese ah, kuwaas oo Dowlada Thailand kala hadlay in TV-ga Somali channel hawada Sateliteka Thaicom laga saaro. Thaicom oo dowlada Thailand leedahay ayaa oggolaatay waxayna hawada ka saartay TV-ga SNTV (somali National TV) oo ay ku qaladay innuu yahay Somali Channel, waxaana SNTV loo soo diray warqad loogu sheegayo in hawada laga saaray maadama ay soo daayaan waxyaalo liddi iyo xasilooni dari ku ah wadanka Ethiopia. SNTV oo ka dacwooday arrintaas waxa ay waqti siisay TV-ga Somali Channel innuu markale ka fiirsado Barnaamijka Ilays TV oo ay aggaasimayeen dhalinyaro u ololeeya qadiyada Ogaden oo magaalada London ku nool. Maamulka Somali channel waxa muddo kadib markii cadaadis badan laga saaray wadanka Djibouti oo iyana khadkooda Cable-ka ah ka saaray Somali channel iyo hawada Thicom-kaba markii xanibaad laga saaray, waxay go’aan sadeen inay joojiyaan Barnaamijka Ilyas TV May 2011.
Eritrea TV iyo Barnaamijka Ilays
Barnaamijka Ilays TV ayaa jaanis ka helay TV-ga qaranka Eritrea innuu todobaadkiiba saacad ka siiyo Barnaamijka ilays TV iyada oo howlgalkaas bilowday June 2011. Dhalinyaro kasoo jeeda Somalida Ogadeniya oo kunool xeryaha Qaxootiga Wadanka Eritrea ayaana lootababaray inay farsamada barnaamijka Ilays ka wadaan xarunta TV-ga Qaranka Eritrea.
Dowlada Ethiopia oo ka jawaabaysa Dhaq-dhaqaaqa Barnaamijka Ilays waxay bilowday inay soo gadato qalab lacag Malaayiin Dollar laga bixiyay si ay ugu jaam gareyso TV-ga Eritrea. Waxayna Jaam gareyn ku bilaabeen hawada sare ah TV-ga eritrea Saacadihii uu soo gali jiray Barnaamijka Ilays. Arrintaas Ethiopia ku guuleysan wayday waxay markii danbe guda galeen qorshe weyn oo ay hawada ka jaam gareynayaan dhamaanba Sateliteka arab Site.
Si ay Arab Sat u jaam gareeyaan waxaa qasab ku noqotay Dowlada Ethiopia inay marka hore Jaam gareeyaan 3 TV oo Ethiopia laga lahaa oo kasoo gali jiray Arab Sat si ay hawada geeska afrika uga xidho guud ahaanba Carab Satelite. Jaam hgareyntaas waxa uu saameyay TV-ga Eritrea 1,2 iyo Lubnaan TV, aljazeera iyo satelite ka Nile Sat.
Baadhitaan dheer ka dib waxaa lasoo oggaaday in dowlada Ethiopia ka danbeysay jaam gareynta Arab Sat sanadkii 2012. Waxaana wali socday maxkamad iyo dacwado u dhexeeya Arab Sat iyo Wadanka Ethiopia. Maamulka arab sat waxa markiiba mamnuucay in dib oo danbe Ethiopia xubin uga noqoto Satelite-ka arab Sat.
Barnaamijka Ilays TV- ayaa xanuun badan u geystay dowlada Ethiopia oo ah dowlad gumeysi ah oo jecel xasuuqa ay ka geysanayso dhulka Somalida Ogaden in aan la oggaanin.
Si ay ceebaheeda u daboosho waxa taliska Ethiopia bilaabay inay abuuraan Saxaafad ku hadasha afkeeda. Waxayna markii u horeysay taariikhda sameeyeen TV- afka Somaliga ku hadla oo dad diirka kore somali ka ahi ka shaqeeyaan kuwaas oo baran bagaado iyo af-lagaado u geysanaya dareenka iyo dadnimada shacabka Somalida Ogadeniya.
TV-gan cusub waxaa laga soo daaya dad maxbuusin ah, oo lagu qasbayo inay dadnimadooda xaqiraan kuwaas oo laga sheeg siiyo inay xittaa xoolaha iyo xayawaankaba u galmoodaan, iyaga oo damiirkoda iyo dadnimadooda lagu waxyeeleynayo.
Waxaa kale oo laga soo daayo dhaqamo aan sal iyo raad ku laheyn shacabka Somalida Ogadeniya. TV-gan cusub ee Afka gumeysiga Ethiopia ku hadla waxaa laga daawada heeso gaalaad iyo dhaqamo aan dadku horey u arkin. Waxaana qasab ah qoys kasta oo deegaankaas ku nool in gurigooda laga daawado. Waxaana jeelasha loo taxaabay boqolaal dad ah oo guryahooda uu diiday in TV-ga ESTV laga daawado guryahooda iyaga oo dadkaasi sheegeen in caruurti dhaqamo xun ay ka daawanayaan TV-gan cusub.